Shiinaha Xidho oo saameyn u adkaysi 92 alumina dhoobada dahaarka dhogorta / tubbada taper ee macdanta dhuumaha qaada iyo kuwa alaabada keenaya | YUNFENG
Xiro oo saameyn u adkeysato 92 alumina dhoobada dhoobada dhoobada dhoobada / taper tubada ee dhuumaha xamuulka qaada
Sharaxaadda Badeecadda Nidaamka Qabashada Qalabka Maaddida Caabbinta Suxulka Khadka Ceramic-ka Dharka ugu kharashka badan ee wax-u-qabadka u leh xusulka iyo tee Sinho isticmaal dhejiska, alxanka ama qoolleyda si loogu hagaajiyo dhoobada u adkeysata darbiga hoose ee tuubbada, iyadoo sameysma lakab adag oo ka soo horjeedda xoqidda. Iyada oo iska caabin ah duugga ka xoogbadan waxaa si weyn loogu isticmaalay in shirkadaha warshadaha geeyo pneumatic, nidaamka gudbinta Haydarooliga, gaar ahaan goobta nabaad guurka ee xusulka, Tee, iyo qaybiyaha. Waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ...
Nidaamka Maaraynta Waxyaabaha U Adkaysiga Xoqitaanka Xusulka Ceramic-ka
Dharka ugu kharashka badan ee wax ku ool u ah xusulka iyo tiinka
Sinho waxay isticmaashaa dhejis, alxanka ama qoolleyda si ay ugu hagaajiso dhoobada dhoobada u adkeysata derbiga gudaha ee tuubbada, iyadoo sameysata lakab adag oo ka soo horjeedda xoqidda. Iyada oo iska caabin ah duugga ka xoogbadan waxaa si weyn loogu isticmaalay in shirkadaha warshadaha geeyo pneumatic, nidaamka gudbinta Haydarooliga, gaar ahaan goobta nabaad guurka ee xusulka, Tee, iyo qaybiyaha. Waa mid ka mid ah kanaalada ugu fiican ee qiimahoodu wax ku ool yahay.
Dheji: ka hooseeya 300 ℃
Alxanka: ka hooseeya 600 ℃
Dovetail: ka hooseeya 800 ℃
Dhexdhexaad ku habboon
Qaybaha adag sida budada dhuxusha, dambaska, qolofta iyo slurry, sida dhuxusha dhuxusha, isugeynta, iyo aluminium dareeraha ah.
Miisaanka tuubbada isku dhafan ayaa imminka nus ka mid ah tuubbada dhagaxa ah iyo qiyaastii 50% ee tuubbada daawaha ah. Faa'iidooyinka xirashada iyo u adkaysiga daxalka, cimriga dhuumaha ayaa si muuqata uga dheer kan kale ee tuubooyin adkaysi u leh halkan kharashka shirarka iyo socodsiinta ayaa si weyn loo dhimay.
Si fudud isugu imaad
Culeyskiisa fudud iyo awoodiisa wanaagsan ee alxanka awgood, waxaa si sahal ah loogu soo ururin karaa alxanka ama isku xirka flange oo si muuqata u yareyn kara qiimaha hagaajinta
Marka loo eego cabbirka tuubada iyo walxaha gudbiya, dhuumaha noocan ah waxaa loo dooran karaa inay isticmaalaan laba nooc oo qaabdhismeedka dhoobada ah, tubbada dhoobada guud ama dhoobada dhoobada ah ee ku dhegan tuubbada birta ah. SINHO waxay ku siin kartaa dhuumaha si waafaqsan shuruudaha macaamiisha.Waxay aad ugu qanacsan tahay inay ku siiso sawirrada qalabkaaga iyo astaamaha xaaladda goobta, sidaa darteed waxaan kuu soo bandhigi doonaa barnaamijka ugu habboon ee ka-hortagga xoqidda iyo dharka.
Hore: xirtaan tuubada birta ee dahaadhka dhoobada dhoobada ah
Xiga: 92 alumina dhoobada dahaarka dhoobada ah ee xoqida iyo xalka u adkeysiga u nuglaanta